Atocha ၏သန့်ရှင်းသောကလေးအားဆုတောင်းပါ။ ? လမ်းများဖွင့်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေး။
Atocha ၏သန့်ရှင်းသောကလေးအတွက်ဆုတောင်းခြင်း။ ကက်သလစ်အယူဝါဒကိုသစ္စာရှိရှိယုံကြည်ပြီးကျင့်ကြံပြုမူသောသူများသည်တစ်သက်တာလုံး၌ပင်ထိုသို့ပြုခဲ့ကြသည် Atocha ၏သန့်ရှင်းသောသူငယ်ကိုဆုတောင်းပဌနာ အထူးသဖြင့်ဗင်နီဇွဲလား၊ စပိန်၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတို့တွင်ပါဝါပိုမိုများပြားစွာတည်ရှိပြီး၎င်းကိုနေ့စဉ်ဂုဏ်ပြုသည့်နေရာများနှင့်နှစ်စဉ်ထောင်နှင့်ချီသော visitors ည့်သည်များလက်ခံသောနေရာများတွင်ဖြစ်သည်။
1 Atocha ၏သန့်ရှင်းသောကလေးအတွက်ဆုတောင်းခြင်း၎င်းသည်မည်သူနည်း။
2 လမ်းများဖွင့်လှစ်ရန် Atocha ၏သန့်ရှင်းသောကလေးထံဆုတောင်းပါ
3 အကာအကွယ်အတွက် Atocha ၏သန့်ရှင်းသောကလေးထံဆုတောင်းပါ
5 Santo Niño de Atocha သည်အလွန်အားကောင်းပါသလား။
Atocha မြို့သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိပြီး ၁၃ ရာစုကိုမူဆလင်များလုံးဝကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်ကအကျဉ်းသားများအားကျွေးမွေးရန် ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များကိုသာခွင့်ပြုခဲ့သည်။
အကျဉ်းသားများစတင်ခဲ့သည် ကလေး၏လည်ပတ်မှုကိုလက်ခံရရှိသည် နေ့တိုင်းအစာအာဟာရတောင်းနှင့်ပြည့်စုံသည် ဖြစ်၍၊ လူအပေါင်းတို့သည်ဝစွာစားရကြ၏။
ထိုကောင်လေးသည်ဘုရားဖူးကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောအဝတ်အစားများ ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယုံကြည်သူများပြားလာသောအစားအစာယုံကြည်သူများသည်သူတို့ကိုကျွေးမွေးရန်ရောက်လာသည့်သခင်ယေရှုသည်သာဖြစ်သည်ကိုသိသည်။
လမ်းများဖွင့်လှစ်ရန် Atocha ၏သန့်ရှင်းသောကလေးထံဆုတောင်းပါ
Clement and kind Atocha ၏မွေးကင်းစကလေးငယ်၊ သင့်ကိုကျွန်ုပ်မည်မျှချစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုသင့်အားပြောပြရန်သင့်ထံသို့လာရောက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားသင်၏သနားကြင်နာတတ်သောမျက်လုံးများကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးသောစိတ်ပျက်အားငယ်မှုနှင့်ဆင်းရဲခြင်းများကိုတွေ့မြင်စေနိုင်သည်။ ပြနာများသည်ကြီးလေးလှပါ၏။ ကျွန်ုပ်သည်အဖြေရှာရန်မတွေ့ပါ။ အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသူများ၊ ကျွန်ုပ်ထံမှဝေးဝေးမသွားပါစေနှင့်။ ကျွန်ုပ်အားသင့်အားအကူအညီတောင်းပါကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏။ နှစ်သိမ့်မှုနှင့်ကူညီမှုအတွက်အရေးတကြီးတောင်းဆိုပါသည်။ မည်သည့်ရောဂါ၏အကူအညီမဲ့, ဘုရားသခငျ့ရောဂါကိုငြိမ်းစေသော၏။
ခွန်အားကြီးသောသန့်ရှင်းသောကလေး - ယနေ့ငါမင်းကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြီးသင်၏ဆုတောင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တောင်းပါ၏ (ကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်သုံး ဦး၊ မင်္ဂလာဆောင်မေရီ ၃ ခုနှင့်ဘုန်းအသရေသုံးပါး) သင်၏ချစ်ခင်မြတ်နိုး။ ချစ်ခင်မြတ်နိုးရသောမိခင်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးအသားအရောင်ခွဲခြားမှုအတွင်း၌သင်ပါဝင်ခဲ့သည့်နေ့ကိုအမှတ်ရခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောယေရုရှလင်မြို့မှဗက်လင်မြို့သို့သွားရမည်။
ကျွန်ုပ်၌ရှိသောကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းချက်များကိုနားထောင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၌ယုံကြည်မှုရှိပါကကျွန်ုပ်တောင်းလျှောက်သောအရာကိုပေးပါ။ (သင်အောင်မြင်လိုသောအရာကိုတောင်းပါ) ။
ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ထက်သင့်ကိုငါချစ်သောသူ၊ ပြီးပြည့်စုံသောဥာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်၊ ခေရုဗိမ်နှင့်စရယ်ဖင်တီးဝိုင်းတို့၏အလယ်၌၊ အစဉ်အမြဲကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းပဌနာကိုပျော်ရွှင်စွာဖြေဆိုနိုင်သည့် Atocha ၏အဖိုးတန်ဆုံးသောသန့်ရှင်းသောကလေးငယ်ပါ။
မှားယွင်းပြီးဖြတ်ကူးရန်မဖြစ်နိုင်ပုံရသောထိုဖြတ်သန်းမှုသည်သေချာသည် သန့်ရှင်းသော Atocha ကလေး၏အကူအညီဖြင့်သင်သွားနိုင်သည်.
ဆုတောင်းခြင်းသည်ဘဏ္sphereာရေးနယ်ပယ်၊ လေ့လာမှုများ၊ မိသားစုဝင်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်လိုသောအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။
အကာအကွယ်အတွက် Atocha ၏သန့်ရှင်းသောကလေးထံဆုတောင်းပါ
အသန့်ရှင်းဆုံးကလေးငယ် Atocha of Jesus၊ လူအားလုံး၏အထွေထွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကလေး၊ ငါနင့်ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်၊ ယနေ့ခေတ်မှာကျွန်ုပ်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်သုံးယောက်၊ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သောမာရိတို့၊ သင်ပြုခဲ့သောထိုနေ့ရက်ကိုအမှတ်ရလျက်၊ သင်၏ချစ်ခင်မြတ်နိုးဆုံးမိခင်၏သန့်ရှင်းသောယေရုရှလင်မှရောက်ရှိရန်ရောက်ရှိရန် ဗက်လင်မြို့သို့သွားရမည်
အဘယ်အတွက်ငါဒီတန်ဖိုးများကိုတင်ပြနှင့်ဉာဏ်ပညာနှင့်တန်ဆာဆင်ထားသောခေရုဗိမ်များနှင့်သရဖမ်တို့၏သံစုံတီးဝိုင်းများနှင့်အတူလိုက်ပါလာမည်။ ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည့်အရာ၊ atocha ကောင်လေး၊ ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပြီးသင်ဟန်ဆောင်နေသည့်ပျော်ရွှင်မှုကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည်။ သင်တို့ကိုငါမညှဉ်းဆဲ၊ ငါသည်လည်းသေခြင်းမှထမြောက်လိမ့်မည်။
(ဤနေရာတွင်တောင်းဆိုမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်သုံး ဦး၊ မိုးသီးမာရိနှင့်ဘုန်းတော်သုံးပါးတို့ကိုဆုတောင်းကြသည်)
အဖြစ် လူတွေကိုကူညီကာကွယ်ပေးခဲ့တယ် သူကပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အပေါ်လာမြင်ဘူးကိုလည်းငါတို့နှင့်အတူပြုလိမ့်မည်။
သူသည်ကလေးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်မတူတော့ပါ၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံကိုယ်ထိလက်ရောက်ချဉ်းကပ်နေသည်ကိုမမြင်ရပါ။ သို့သော်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းလျှင်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကြားနာ။ အကူအညီတောင်းခံရန်လာသောအခါသေချာစွာပြုမူလိမ့်မည်။
ချစ်ခင်ရပါသောချစ်ခင်ရပါသောသန့်ရှင်းသောဘုရား၏ကလေးငယ်၊ ကျွန်ုပ်၏နှစ်သိမ့်မှုများစွာ - ကျွန်ုပ်၏အနာရောဂါကြောင့်ခံစားရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်သင်၏ရောက်ရှိခြင်းသို့ ရောက်၍ သင်၏ဘုရားသခင့်အကူအညီကိုအသေအချာတောင်းခံရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအရှိဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
သူ့အတွက် infinito သင်ပေးရမည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သူတို့အားသူတို့၏အနာရောဂါများနှင့် ၀ မ်းနည်းမှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်။ သင်၏အံ့ဖွယ်အမှုများသည်သင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ ထာဝရချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကရုဏာတော်ကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ချစ်ခင်ရသောကလေးငယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ချစ်မြတ်နိုးသောကလေး၊ ကျွန်ုပ်၏နှစ်သိမ့်မှု၊ အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွင်နာကျင်မှု၊ သက်သာခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်သောခွန်အားပေးပါရန်နှိမ့်ချစွာဖြင့်တောင်းပန်ပါ၏။ အထူးစွမ်းရည်၊ ငါ့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ငါ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုငါ့ရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ကိုက်ညီလျှင်ပြန်လည်ရယူရန်။
ဒီ၏စွမ်းအားကိုအသုံးချ ဆုတောင်းခြင်း ကျန်းမာရေးအတွက် Santo Niño de Atocha သို့
Atocha ၏သန့်ရှင်းသောကလေးမလုပ်နိုင်သည့်အခက်အခဲမရှိပါ သင့်ရဲ့အစွမ်းထက်အကူအညီပေးနိုင်သည်.
ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရောဂါများကိုသူသယ်ဆောင်ခဲ့စဉ်ကတည်းကသူကိုယ်တိုင်မခံစားခဲ့ရသည့်ရောဂါတစ်ခုမျှမရှိပါ။ ဒီဆုတောင်းပဌနာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်ဘုရားသခင့်အံ့ဖွယ်အမှုပြုခြင်းကိုတောင်းဆိုသည်။
Santo Niño de Atocha သည်အလွန်အားကောင်းပါသလား။
နှစ်ပေါင်းများစွာပေမယ့် သေခြင်း သခင်ယေရှုထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်၊
Atocha ၏သန့်ရှင်းသောကလေးသည်သူ၏တန်ခိုးတော်သည်ကြီးမြတ်ကြောင်းနှင့်သူအားသစ္စာရှိရှိယုံကြည်သူများကိုမှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်ဟူသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းကို ဆက်၍ ဆုတောင်းကြပါစို့။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုအဆုံးမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ဆက်လက်ဖြေကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျ Atocha ၏သန့်ရှင်းသောကလေးဆုတောင်းပဌနာကြိုက်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Saint Helena ကိုဆုတောင်းပါ